Nagarik daily – Page 13 – बाइरोडको बाटोमा
Category: Nagarik daily
Posted on August 21, 2014 Commentary
by गुणराज लुइँटेलLeaveacomment on ‘छेपाराको कथा’
बाल्यकालमा हजुरआमाले सुनाउने गरेको ‘छेपाराको कथा’ प्रत्येक वर्षको बाढीपहिरोपछि सम्झना हुनेगर्छ। हरेक वर्ष बाढी आउँछ। निर्दोष मानिस त्यसमा पर्छन्, मारिन्छन् र विस्थापित हुन्छन्। हजुरआमाको त्यो…
Posted on August 13, 2014 Commentary
आखिर चरी हाम्रा को हुन्?
by गुणराज लुइँटेलLeaveacomment on आखिर चरी हाम्रा को हुन्?
समय गाईजात्राको छ। सन्दर्भ चर्चा थालौँ कवि लक्ष्मण गाम्नागेको कविताबाट। यो कविता गाईजात्राभन्दा धेरै अघि उनले ओसो तपोवनमा सुनाएका थिए। गाईजात्रा पर्व आएर पनि गयो…
Posted on August 6, 2014 Commentary
किन मोदी फरक हुन्?
by गुणराज लुइँटेल1 Comment on किन मोदी फरक हुन्?
‘म पक्का अहमदावादी हुँ। हाम्रो विशेषता भनेको हामीले सबैभन्दा कम खर्च कसलाई गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउनु हो। हामी एकतर्फी भाडा तिरेर दोहोरो यात्रा गर्नुमा विश्वास…